LOW Adventist Portal GUANDU / ES - လျင်မြန်စွာသညျယရှေုပြန်လာလိမ့်မည်!
celular: (027) 99777-2514 - Vivo
LOW Adventist Portal GUANDU / ES လျင်မြန်စွာသညျယရှေုပြန်လာလိမ့်မည်!
ကျိန် ဆို. ပူဇော်
ဥပုသ် applications များ
Ellen White က - အထွေထွေ
Ellen White ကကျမ်းစာလာသည်
Ellen White ကလေ့လာရေး
Ellen White က - eBooks
Ellen White ကစာအုပ်တွေကို
စနစ်များ Adventist Gerecimentos
ကလပ်ကိုရှာပါ - SDA
ဆိုက်ကိုများအတွက်ရေဒီယို Code ကို
မျှော်လင့်ခြင်း 2018 ရဲ့ Power
ရှာရန် 2017 အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်
Living မျှော်လင့် 2016
မျှော်လင့်ခြင်း 2015 နဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ပါ
မဟာမျှော်လင့် 2012 / 2013
မျှော်လင့်ခြင်း 2011 နေဆဲရှိပါသည်
ရှင်သန်နေသော 2008 ဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဥပုသ်အနိမျ့Guandú / ES churches
အဆိုပါ Adventist ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း7နေ့က°ကားအဘယ်သူနည်း
စာမကျြနှာ 1 3412345»102030...နောက်ဆုံး»
ဦးစီးဌာန SDA ဆိုတဲ့သဘောတရား
Baixoguandu 12 သြဂုတ်လ 2017	ဦးစီးဌာန SDA ဆိုတဲ့သဘောတရား03,608
Ancionato Functions များနှင့်အရည်အချင်းများ: အဆိုပါအလုပ်အရေးကြီးဆုံးရန်အရေးကြီးပါသည်။ သူဟာလဖြစ်ပါတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာ၏မရှိခြင်းအတွက်အသင်းတော်၏တစ်ဦးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နှုန်ဆောင်မှုကိုမောင်းနိုင်ခဲ့ဖြစ်သင့်ဝန်ကြီးနိုင် ... အားလုံးဌာနဆိုင်ရာများ၏ဒေသခံဘုရားကျောင်းနှင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူး၏ဝိညာဉျညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ် ...
Baixoguandu 12 သြဂုတ်လ 2017	ဦးစီးဌာန SDA ဆိုတဲ့သဘောတရား04,900
Baixoguandu 12 သြဂုတ်လ 2017	ဦးစီးဌာန SDA ဆိုတဲ့သဘောတရား03,137
Baixoguandu 12 သြဂုတ်လ 2017	ဦးစီးဌာန SDA ဆိုတဲ့သဘောတရား02,682
Baixoguandu 12 သြဂုတ်လ 2017	ဦးစီးဌာန SDA ဆိုတဲ့သဘောတရား02,699
Baixoguandu4ရက်သတ္တပတ်အကြာ	HIGHLIGHTS0528
Baixoguandu 20 ဇန်နဝါရီလ 2019	HIGHLIGHTS0495
Baixoguandu 19 ဇန်နဝါရီလ 2019	HIGHLIGHTS0723
Baixoguandu 14 ဇန်နဝါရီလ 2019	HIGHLIGHTS0701
Baixoguandu 11 ဇန်နဝါရီလ 2019	HIGHLIGHTS01,024
Adventist သတင်းများ - ASN
Baixoguandu 10 နာရီအကြာက	Adventist သတင်းများ - ASN011
Baixoguandu 1 နာရီအကြာက	Adventist သတင်းများ - ASN042
Baixoguandu 1 နာရီအကြာက	Adventist သတင်းများ - ASN041
Baixoguandu3days ago	Adventist သတင်းများ - ASN0173
Baixoguandu 10 နာရီအကြာက	Programs အထူး07
Baixoguandu2days ago	Programs အထူး0163
Baixoguandu2days ago	Programs အထူး0134
Baixoguandu3days ago	Programs အထူး0177
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	Programs အထူး0239
Group ၏ဧဝံဂေလိ 300 ဂိဒေါင်သည်
Baixoguandu 26 ဒီဇင်ဘာလ 2018	Group ၏ဧဝံဂေလိ 300 ဂိဒေါင်သည်0920
Baixoguandu 19 ဒီဇင်ဘာလ 2018	Group ၏ဧဝံဂေလိ 300 ဂိဒေါင်သည်0808
Baixoguandu 22 စက်တင်ဘာလ 2018	Group ၏ဧဝံဂေလိ 300 ဂိဒေါင်သည်02,299
Baixoguandu 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018	Group ၏ဧဝံဂေလိ 300 ဂိဒေါင်သည်02,933
တစ်ဦးက Lista က de Schindler - Trailler
Baixoguandu 30 2017 အောက်တိုဘာလ	Group ၏ဧဝံဂေလိ 300 ဂိဒေါင်သည်02,958
Baixoguandu 21 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ကမျြးစာအံ01,066
ကမျြးစာကိုလေ့လာရေး: 21 မှ Themes 30 - ကျမ်းစာအမှန်တရား3ºထောင်စုနှစ်
Baixoguandu 24 မေလ 2018	ကမျြးစာအံ02,322
ကမျြးစာကိုလေ့လာရေး: 11 မှ Themes 20 - ကျမ်းစာအမှန်တရား3ºထောင်စုနှစ်
Baixoguandu 24 မေလ 2018	ကမျြးစာအံ01,908
ကမျြးစာကိုလေ့လာရေး: 1 မှ Themes 10 - ကျမ်းစာအမှန်တရား3ºထောင်စုနှစ်
Baixoguandu 24 မေလ 2018	ကမျြးစာအံ02,104
Baixoguandu 22 ဒီဇင်ဘာလ 2018	CURSO DUPLAS MISSIONÁRIAS 20190976
Baixoguandu 22 ဒီဇင်ဘာလ 2018	CURSO DUPLAS MISSIONÁRIAS 20190956
Baixoguandu4ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SEMANA SANTA 20190256
Baixoguandu 17 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA SANTA 20190875
Baixoguandu 17 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA SANTA 201901,642
Baixoguandu 17 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA SANTA 20190862
Baixoguandu 11 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA SANTA 201901,061
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	TEMA JOVEM 20190342
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	TEMA JOVEM 20190199
Baixoguandu 15 ဒီဇင်ဘာလ 2018	TEMA JOVEM 201901,206
Baixoguandu 15 ဒီဇင်ဘာလ 2018	TEMA JOVEM 201901,621
Baixoguandu 15 ဒီဇင်ဘာလ 2018	TEMA JOVEM 201901,116
Baixoguandu4days ago	10 DIAS E 10 HORAS DE JEJUM E ORAÇÃO 20190308
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	10 DIAS E 10 HORAS DE JEJUM E ORAÇÃO 20190529
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	10 DIAS E 10 HORAS DE JEJUM E ORAÇÃO 201901,221
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	10 DIAS E 10 HORAS DE JEJUM E ORAÇÃO 201901,034
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	10 DIAS E 10 HORAS DE JEJUM E ORAÇÃO 20190674
Baixoguandu 10 နာရီအကြာက	TEMAS DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO051
Baixoguandu 1 နာရီအကြာက	TEMAS DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO0124
Baixoguandu2days ago	TEMAS DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO0210
Baixoguandu3days ago	TEMAS DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO0213
Baixoguandu4days ago	TEMAS DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO0227
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	DIA MUNDIAL JOVEM ADVENTISTA 20190262
Baixoguandu42018 အောက်တိုဘာလ	UM ANO DE MISSÃO 201902,197
Baixoguandu42018 အောက်တိုဘာလ	UM ANO DE MISSÃO 201902,068
Baixoguandu42018 အောက်တိုဘာလ	UM ANO DE MISSÃO 201902,125
Baixoguandu42018 အောက်တိုဘာလ	UM ANO DE MISSÃO 201901,998
Baixoguandu42018 အောက်တိုဘာလ	UM ANO DE MISSÃO 201902,205
Baixoguandu 25 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ADORAÇÃO EM FAMÍLIA 201901,070
Baixoguandu4ဒီဇင်ဘာလ 2018	ADORAÇÃO EM FAMÍLIA 201901,017
Baixoguandu 29 နိုဝင်ဘာလ 2018	ADORAÇÃO EM FAMÍLIA 201901,190
Baixoguandu 29 နိုဝင်ဘာလ 2018	ADORAÇÃO EM FAMÍLIA 201901,145
Baixoguandu 29 နိုဝင်ဘာလ 2018	ADORAÇÃO EM FAMÍLIA 201902,303
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SEMANA DA FAMÍLIA 20190179
Baixoguandu 21 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA DA FAMÍLIA 20190893
Baixoguandu 21 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA DA FAMÍLIA 20190905
Baixoguandu 21 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA DA FAMÍLIA 20190917
Baixoguandu 20 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SEMANA DA FAMÍLIA 20190899
Baixoguandu 25 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ENCONTRO DE PAIS 201901,016
Baixoguandu 19 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ENCONTRO DE PAIS 20190828
Baixoguandu 19 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ENCONTRO DE PAIS 20190910
Baixoguandu 19 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ENCONTRO DE PAIS 20190890
Baixoguandu 19 ဒီဇင်ဘာလ 2018	ENCONTRO DE PAIS 20190791
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SONHANDO ALTO 20190225
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SONHANDO ALTO 20190193
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SONHANDO ALTO 20190227
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SONHANDO ALTO 20190202
Baixoguandu3ရက်သတ္တပတ်အကြာ	SONHANDO ALTO 20190198
Baixoguandu 22 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SÉRIE EVANGELÍSTICA 20190961
Baixoguandu 8 ဒီဇင်ဘာလ 2018	SÉRIE EVANGELÍSTICA 201901,086
Baixoguandu7days ago	MATERIAIS DA DIVISÃO SUL-AMERICANA 20190209
Baixoguandu7days ago	MATERIAIS DA DIVISÃO SUL-AMERICANA 20190194
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	MATERIAIS DA DIVISÃO SUL-AMERICANA 20190257
Baixoguandu2ရက်သတ္တပတ်အကြာ	MATERIAIS DA DIVISÃO SUL-AMERICANA 20190262
နောက်ဆုံး site ကို update ကို
E-mail ကို: sac@cpb.com.br
မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် - အနိမျ့ Guandu / ES
ပရိုတက်စတပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး 500 နှစ်များ
ဖွင့် - ကိုပစ်မှတ်ထားခရစ်ယာန်တို့၌
feliz7Play စ
မျှော်လင့်ချက် Channel ကို
အမှန်တရား၏ Mira အတွက်
တီဗီနယူးအချိန် - တိုက်ရိုက်
Baixo Guandu / ES စက်တင်ဘာလ 18 2014 ထံမှ - Thiago Amar de Oliveira ကထိန်းသိမ်း။